China 3Z Cultivator N'ihi ọka Soybean Cotton factory na suppliers | RY AGRI
Igwe akụrụngwa na-ezo aka na igwe eji arụ ọrụ, ịtọpụ ala, imebi ma sie ike n'elu ala, ịkọ ala na ịnyagharị n'oge oge uto nke ihe ubi, ma ọ bụ mezue arụmọrụ ndị a dị n'elu ma mepụta njikọta n'otu oge, tinyere onye na - azu ihe n’ile, onye na - acho ahihia ya na ndi nkuzi puru iche. A na-eji ihe ọkụkụ zuru ezu eme ihe maka ndina akwa mkpụrụ tinyere nkwadebe tupu ịgha mkpụrụ, njikwa nke ala na-enweghị isi, ịgwakọta ọgwụ nri na kemịkal. Ọrụ nke ịgha mkpụrụ nke ahịhịa na-agụnye ịtọghe ala, imebi ala dị elu, ịkpụlata ahịhịa, weeding, overdressing and furrow cultivation. A na-eji ụfọdụ ndị ọrụ ubi pụrụ iche arụ ọrụ pụrụ iche na ubi mkpụrụ osisi, ubi tii na ubi rọba.
3Z cultivator ugbo ubi cultivator adabara maka ịkụ ọka, owu, soybean, sugar biet, wdg Ọ pụrụ ịrụ cultivating, ditching, ịnya, miri loosing, wdg The rotary cultivator nwere ike imebi obi tara mmiri, rụrụ ala, ma na-n'okpuruala. mmiri nke ala, ma hichaa ahịhịa ọka nke ihe ọkụkụ. Igwe akụrụngwa a bụ ezigbo usoro. Ọ bụ nchebe, inogide, na elu arụmọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, usoro ịkụ nke usoro 3Z naanị nwere ọrụ ahịhịa na ịtọghe ala. Ọ bụrụ na ndị ahịa chọrọ ọrụ ndị ọzọ dịka njikọta spam na njikọ rotary, anyị nwere ike ịhazi ha. Anyị kwesịrị iji dakọtara dị iche iche ụdị dị ka ndị ahịa na traktọ ahịa traep nso. Ọ bụrụ na ike nke traktọ dị oke elu, ọ dị mfe imebi igwe. Ọ bụrụ na traktị horsepower dị obere na igwe ahụ buru oke ibu, ọ ga-esiri ike ịrụ ọrụ na usoro ọrụ, ọ na-esikwa ike ịnweta mmetụta ọrụ ahụ. Yabụ, ọ dị ezigbo mkpa ịkọwa gburugburu igwe na ngwa ọrụ na mbido.
1.Ọ bụ a n'ịnyịnya ugbo, ubi cultivator na 18-80hp traktọ.
Ihe omimi nke oru ugbo a nwere ike idozi.
3.The koo ubi n'ọnụ nwere ike ịbụ selectable gị mkpa.
Nke gara aga: Arọ Disc Harrow Maka Ugbo 1BQX
Osote: Farm Mejuputa Disc koo ubi maka Ahịa